Ahoana no hihaino ao ny tiany Music amin'ny Apple Watch ary inona no ho afaka hihaino? Ny zavatra rehetra noheverina, izay miantehitra amin 'ny fiambenana modely. Eto dia hahazo asa samy hafa rehetra azonao atao mampiasa ny Apple Watch tsy miaraka tsiroaroa amin'ny iPhone.
Any Apple Watch mihazakazaka watchOS 4.1 na ny ambony dia hanampy anao mba mihaino ny famoriam-bola sy ny Playlists atao amin'ny iPhone . Azonao atao koa ny fifantohana amin 'fampiasa toy ny Spotify sy iHeartRadio , toy ny Apple Music (Raha ianao mpanohana).
An Apple Watch Series 3 na Apple Watch Series 4 mihazakazaka watchOS 4.1 na ny ambony dia afaka manao ny rehetra voalaza etsy ambony, nefa izany fifandraisana afaka toy izany koa ny Apple Radio ary misy hira efa mifanentana ny alalan'ny iCloud.
Na dia mamy kokoa modely afaka milalao fotsiny Hira nataon'ny piggybacking noho ny iPhone, ny Series 3 ary 4 Afaka mivantana mozika ara-dalàna avy amin'ny rahona. Ahoana ny maka Gander isika amin'ny fomba isan-karazany ho Henoy Music eo Amin'ny Apple Watch .
1 Ampiasao Apple Watch for Music Tsy Misy iPhone
Ampiasao Apple Watch for Music Tsy Misy iPhone
Segue ny fiambenana. Press ny Digital Crown ho kivy ny Home efijery. Peho ny Music fampiharana. Avy izany teboka, dia afaka mamadibadika vinety fanangonana ny isan-karazany sy ny Playlists. Etsy ankilany, Peho ilay andalana ho an'ny Library sy ny paompy eo amin'ny fizarana ho an'ny Playlists, Artists, Albums, na Songs.
Ianao dia avy eo ho afaka swipe alalan'ny assortments nanitsy amin'ny fiambenana. Peho amin'ny famoriam-bola, ny filaharan-kira, mpanao asa tanana, na miray feo tianao ho re. Azonao atao ny mifehy ny mozika amin'ny famantarananao amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Play / Bokotra fiatoana, bouncing ny lalana manaraka, na hopping ny lasa lalana. Afaka mifehy ny boky toy izany koa alalan 'ny fitodihana ny Digital Crown.
Vakio ity lahatsoratra ity, izay ahitana vaovao momba ny tanteraka Ny fomba fampiasana Apple Watch for Music Tsy Misy iPhone. Eto dia hahazo asa samy hafa rehetra azonao atao ny mampiasa paoma Mijery raha tsy ampiarahina amin'ny iPhone .
ES File Explorer Ho an'ny Windows Windows (10/8/7) Download
Mematic Ho an'ny PC
Filed Under: Download Facetime Natambatra tamin'ny: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone